Diego Costa oo maalinta berito ah si lama filaan ah ugu biiri kara kooxda… – Gool FM
Diego Costa oo maalinta berito ah si lama filaan ah ugu biiri kara kooxda…
Byare September 7, 2017
(Europe) 07 Sebt 2017. Diego Costa ayaa ku fashilmay inuu ku qasbo Chelsea inay dib ugu celiyaan kooxdiisii hore ee Atletico Madrid intii uu furnaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda balse weli wuxuu heystaa wado uu uga baxsan karo.
Waxaa la warinayaa in Costa uu si lama filaan ah beri ugu biiri karo kooxda Besiktas ee dalka Turkiga.
Warar ka imaanaya dalka Spain oo la soo mariyay Football London ayaa warinaya in Besiktas ay diyaar u tahay inay u soo dhaqaaqdo dhaliyaha reer Spain ka hor inta uusan xirmin suuqa horyaalka Super Liga maalinta berito ee Jimcaha.
Kooxda reer Turki ayaa horey ula soo wareegtay xiddigo magac wayn leh sida daaficii dhexe ee Real Madrid Pepe.
Maamulka sare ee naadiga Besiktas ayaa aaminsan in heshiis gaaban oo amaah ah ay kula soo wareegaan Costa ay u fiican tahay labada dhinacba.
Taalaadidii ayaa la wariyay in Costa uu dib ugu soo laabtay London kaddib saddex bilood uu ku maqnaa dhulka uu asal ahaanta ka soo jeedo ee Brazil inkastoo weli warkaas loo heynin xaqiijin dhab ah.
Julian Draxler oo qirtay inuu sugayay dalab uga yimaada Barcelona ilaa daqiiqadii ugu danbaysay ee suuqa
Mourinho oo waqti uu isku muujiyo u qabtay Luke Shaw